Iholide losuku lukazwelonke, kungumbhangqwana wakho wesibili wamehlo
Ngokushesha yiholide likazwelonke losuku, ngikholwa ukuthi abalingani abaningi abancane bebelokhu bejabule bangenakubekezeleleka, futhi isikhathi eside babefuna ukuya lapho behamba khona, uku ...
Ngokushesha yiholide losuku lukazwelonke, ngikholwa ukuthi abalingani abaningi abancane bebelokhu bejabule bangenakubekezeleleka, futhi isikhathi eside babefuna ukuya lapho bezohamba khona, kuhlelwe imizila yezokuvakasha. Ngisho nabanye abantu bayayishiya inkampani, ihlele umgwaqo. Abantu bashiye kodwa bashiye ikhaya elincane elingagadi, elivumela amasela amaningi athole ithuba elihle lokweba.
Ngokusho kwezibalo, imvamisa yokwebiwa ngesikhathi sosuku lukazwelonke kwanda kakhulu. Kube khona izakhamizi eziningi phakathi nosuku lukazwelonke zihamba ekhaya ziye zantshontsha, ngoba ikhaya alifakwanga ikhamera yokubhekwa, ngakho-ke ayinakuthola isela. Ayikho imikhondo efanelekile, amaphoyisa okunzima ukuwaxazulula leli cala, izakhamizi zidla kuphela ukulahleka kwazo. Ngokuphambene nalokho uma ikhaya lifakiwe amakhamera wokuhlola, kungumbhangqwana wakho wesibili. Ungase futhi ubone ikhaya lapho ukwenziwa kwesikrini, lapho isela lapho ungalubika ngokushesha emaphoyiseni. Noma ungasiboni isikrini sokuqapha ngesikhathi, emuva ekhaya kungabona namasela antshontsha isikrini, anikeze amaphoyisa izinkomba, ngikholwa ukuthi bazosheshe bathole icala futhi bathole impahla yakho.
Ngesikhathi sosuku lukazwelonke, ithrafikhi ephezulu kakhulu inkulu kakhulu, imvamisa abanye abantu bazophuza ukushayela, ukukhathala ukushayela, ngakho-ke izingozi zomgwaqo zizokwenzeka. Ngemuva kokuvela kwezingozi zomgwaqo ukuthola umuntu onokwethenjelwa, umuntu ophethe akacaci, sidinga amehlo amabili esibili ukusisiza sinqume. Emgwaqweni omkhulu ofakwe amakhamera ahlukahlukene wokubhekwa, kuhlale kuthathwa isikrini sengozi yethrafikhi, singavumela amaphoyisa omgwaqo omkhulu ngaphandle kwesikrini ngaleso sikhathi ukunquma umuntu onokwethenjelwa.
Ukuhamba kuzothatha imithwalo eminingi, imithwalo nayo iningi lamasela asemasela. Bazophenduka lapho ususa imithwalo yakho buthule, engase ibe nesikhwama sakho kanye namadokhumenti, akukho madokhumenti kanye nesikhwama lapho ungakwazi ukuya khona. Lapho lokhu kwenzeka, kufanele uthukuthele ngokushesha abasebenzi, kuzo zonke iziteshi ezinkulu kanye namaphasiphothi afakwe uhla oluphelele lwamakhamera wokuhlola, ngokusebenzisa isikrini sokubhekwa kungathola ngokushesha indawo yesela futhi lithole imithwalo yakho.
Ngesikhathi sosuku lukazwelonke, okwabo kanye nempahla yokwenza izindlela zokuphepha ukuvikela izingozi noma ukulahleka kwempahla. Ekugcineni, ngifisa ukuthi nonke nonke nibe neholide leNational Day National.
Umsuka Womkhosi Wama-Maild-Autumn OLANDELAYO